Home » Lahatsoratra farany farany » Serivisy fampandrenesana tariby » Ahoana no nanovan'ny valanaretina fanabeazana mandray vahiny?
Ny areti-mandringana dia nisy fiantraikany tamin'ny indostria tsirairay avy ary ny indostrian'ny fandraisam-bahiny no haingana indrindra hamaly ireo fiovana mitranga manerantany. Ny toetran'ny indostrian'ny faharetana sy ny fahaiza-mampifanaraka dia naneho ny tenany tamin'ny toe-javatra areti-mifindra. Ny marika fandraisam-bahiny lehibe dia mivoatra ihany koa amin'ny faritra toa ny fandidiana, ka miteraka rafitra marefo sy lafo vidy. Misy fampidirana teknolojia bebe kokoa amin'ireo marika ireo ary mihombo zava-baovao izy ireo.
Dr Suborno Bose, ny filoha sady Lehiben'ny Mentor ao amin'ny IIHM, dia efa niresaka momba ny safidy mety ho an'ny mpianatra miala amin'ny toeram-piofanana ho tia mandray vahiny. Androany, ny areti-mifindra dia nampitombo ny fahafaha-mahazo ireo nahazo diplaoman'ny fandraisam-bahiny ary ny IIHM no mitarika ny fampiofanana ny mpianatra sy ny fanomanana azy ireo amin'ny sehatry ny indostria. Dr Bose dia mino fa ny tontolon'ny post-pandemie dia hamorona vintana ho an'ireo maniry ny indostria ary hitaky fahatakarana bebe kokoa ireo faritra izay lasa manandanja ankehitriny, toy ny fandrosoan'ny teknolojia eo amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny.
Ny tontolon'ny post-pandemi dia hamorona làlana vaovao tsy ampoizina ho an'ireo mpianatra mandray vahiny. Ny indostria dia hitaky fahatakarana bebe kokoa amin'ny faritra toy ny vahaolana teknolojia, maodely serivisy ambany, fitantanana ny loza voajanahary, fandaminana miasa mavitrika ary famerenam-bidy. Miaraka amin'ny fangatahana toy izany dia hitombo ihany ny filàna matihanina mampiantrano vahiny. Noho izany, ny fanabeazana dia hanana mpianatra miomana amin'ny fahaizana izay hahatonga azy ireo hahomby kokoa sy ho avy, Ny fandraisana vahiny amin'ny maha-asa azy dia hitohy ho mavitrika, mitaky ary manaitaitra.
Ny fanabeazana amin'ny fandraisam-bahiny dia ahitana fiofanana sy fanentanana be dia be ary ny IIHM dia manome ireo roa ireo mba hiantohana ny fivelaran'ny mpianatra manontolo. Raha IIHM dia manofana azy ireo hiditra amin'ny sehatry ny asa amin'ny indostria isan-karazany, manentana ny fanahin'izy ireo koa ny hanomboka ny asany manokana amin'izay faritra mahaliana azy ireo. Izy io dia manana sela fampandrosoana fampandrosoana mpandraharaha manokana antsoina hoe SAHAS. Ity dia volam-pahafatesana iray izay ahafahan'ny mpianatra tena manentana ny fiainany manokana hizara renivohitra. Tsy maintsy mandefa maodely ara-barotra azo tanterahina sy azo tratrarina izy ireo hahafahany mahazo ny fotodrafitrasa SAHAS.
Ny toe-javatra mahatsiravina dia namela ny tanora maro hanontany tena hoe inona no hataony amin'ny asany. Na izany aza, mpianatra IIHM maro no nanomboka ny asany manokana nandritra ny fanidiana ny areti-mandringana Covid-19 ary mbola mitantana ny orinasany soa aman-tsara. IIHM dia manome tontolo iainana sy rafitra manampy izay ahitan'ny mpianatra aingam-panahy sy fahatokisan-tena hamadika ny nofinofiny sy ny heviny ho tena izy.
IIHM dia namorona tahirim-bolam-panjakana tamin'ny alàlan'ny hetsika antsoina hoe SAHAS. Ny tanjona dia ny hamporisihana ny mpianatra hanomboka ny asany ary ny IIHM dia hanohana ny heviny amin'ny alàlan'ny SAHAS. Ity hetsika ity dia nanosika ny mpianatra maro hanavao mandritra ny fihidiana ary hanomboka ny fanombohany.
Ny fahaiza-manao tena tadiavina eo amin'ny tsena ankehitriny dia ny fahaiza-manao malefaka. Betsaka ny famoahana fikarohana sy mpandinika no naminavina fa ny tontolo aorian'ny aretina dia azo antoka fa hanome lanja bebe kokoa ny fahaiza-manao malefaka. Midika izany fa fampiroboroboana ny fahaizan'olombelona izay manandanja tokoa amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny.
IIHM dia manampy ny mpianatra hahatakatra sy hahafehy ny herin'ny fahaiza-manao malefaka. Rehefa mitrandraka ny lalan'ny asany ireo mpianatra ireo, ireo fahaiza-manao malemilemy ireo dia ho lasa anton-javatra lehibe mamaritra ny hoaviny ary hahatonga azy ireo hatanjaka sy hahay hamolavola, hampivelatra ny fahaizana hanova ny fisainana, hiady amin'ny tsy fahatokisana ary hametraka fitokisana. Ireo toetra ireo dia hanampy azy ireo na amin'ny fotoana fohy na amin'ny fotoana maharitra rehefa mitrandraka ireo vintana sy làlana vaovao eo amin'ny tontolon'ny valan'aretina.
Nandritra ny areti-mandringana dia nanandrana nanentana ny mpianatra, ny mpampianatra ary ny mpiasa IIHM. Ny fitazonana fifandraisana akaiky hatrany amin'ireo mpianatra mba hahafantarana ny filan'izy ireo sy ny fanamby dia manampy azy ireo hifandray amin'ny fanabeazana sy ireo hetsika eny amin'ny campus amin'ny alàlan'ny haino aman-jery an-tserasera. Tamin'ny taon-dasa, ny festival iraisam-pianarana nokarakarain'ny IIHM, Rigolo, dia natao tamin'ny sehatra an-tserasera izay nanentanana ny mpianatra handray anjara sy haneho ny talentany.
Rehefa tonga ny onja voalohany tamin'ny taona 2020 ary niditra an-tsokosoko ny firenena iray manontolo, IIHM dia iray amin'ireo andrim-panjakana voalohany nanapa-kevitra ny hanohy ny fizotran'ny fanabeazana amin'ny alàlan'ny haino aman-jery an-tserasera. Koa satria napetraka teo amin'ny toerany ny haitao, dia afaka nanomboka kilasy avy hatrany izahay. Na izany aza dia nasongadin'i Dr Bose fa ny IIHM dia manana ambadika kilasy virtoaly satria mpahandro iraisam-pirenena maro sy manampahaizana mandray vahiny matetika no nianatra kilasy an-tserasera taloha. Ka io no fotoana iray hafa hijerena ireo fomba fanabeazana amin'ny vanim-potoana vaovao.
Ny fiheverana diso momba ny fandraisam-bahiny dia mifandraika amin'ny hotely fotsiny dia mihamazava ary izany no fomba fampiroboroboan'ny IIHM ny fianarany. Misy tontolon'ny fahafaha-miandry miandry ny mpianatra mandray vahiny ary ny IIHM dia mandrisika hatrany ireo mpianatra hitrandraka tombontsoa ara-barotra sy fandraharahana bebe kokoa ihany koa. Ny mpianatra mandray vahiny dia takiana amin'ny indostria isan-karazany toy ny dia, fitantanana hetsika, banky, fahasalamana, trano mihaja, fivarotana lafo vidy, sidina, fitsangantsanganana ary maro hafa. Ireo asa ireo dia misy fiovana isan-karazany amin'ny asa ary koa mamela ny fanavaozana sy ny fifandraisana manokana. Mpianatra mahandro sakafo koa dia ampianarina hakingana amin'ny fandraharahana sy ny fahaiza-manao amin'ny asa aman-draharaha izay manome azy ireo ny fototra izay vonona amin'izay ho amin'ny asa ho avy.
Ny vina IIHM dia ny hitondra fanabeazana mandray vahiny amin'ny ambaratonga hafa tanteraka izay hanomana ny mpianatra anio ho an'ny indostria sy orinasa rahampitso. Mitarika ny fanovana ary manomana ny mpianatra ho amin'ny normal vaovao izay nanova an'izao tontolo izao mandrakizay tao anatin'ny roa taona. Fikarohana ny mety ho fanabeazana amin'ny fandraisam-bahiny ka izany no nanombohana ny programa FIIHM fiarahamonina izay ahitàna ireo mpiasan'ny indostria sy ny manampahaizana manokana izay hanome torohevitra sy hizara ny traikefany amin'ny mpianatra amin'ny mpianatra. Ivotoerana iray hanaovana fikarohana amin'ny fizahantany izay ilain'ny ora koa no kasaina hatao mba hampifangaroana ny fampianarana fandraisana vahiny amin'ny fampianarana fizahantany.
DR Suborno Bose, CEO an'ny IIHM Hotel School, dia mitarika ny andrim-panjakana hatreo aloha mba hampifanaraka ny fanabeazana amin'ny ara-dalàna vaovao izay ilain'ny ora koa.